Waxyaalaha Balaastik ah, Brightener Balaastik ah, Caaga Uv Absorber - Dhalasho
Nanjing Reborn Qalabka Cusub Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2018, waa soo-saare xirfadle ah oo lagu daro polymer ee Shiinaha, shirkad ku taal Nanjing, gobolka Jiangsu.
Alaabtu waxay daboolaysaa Nalalka Iftiinka, Nuugista UV, Xasiliyaha Fudud, Antioxidant, Wakiilka Nucleating, Dhexdhexaad iyo waxyaabo kale oo gaar ah. Codsiga wuxuu daboolayaa: caag, dahaadh, ranjiyeyaal, faashad, cinjir, elektiroonig iwm
KU DARSAN GAAR AH
KU DARAN KHATARAHA
KU DARSADA BULSHADA
REBORN ayaa ku adkaysatay “Maamulka wanaagsan ee iimaanka. Tayada marka hore, macaamilku waa tan ugu sareysa ”siyaasad aasaasi ah, xoojinta is-dhiska. Waxaan R&D alaabta cusub by iskaashi la University, ilaalinta horumarinta tayada wax soo saarka iyo adeegga. Iyada oo la cusbooneysiinayo isla markaana la waafajinayo warshadaha wax soo saarka gudaha, shirkadeena waxay sidoo kale bixisaa adeegyo la-talin dhameystiran oo loogu talagalay horumarinta dibedda iyo isku biiritaanka iyo soo iibsiga shirkadaha tayo sare leh ee gudaha. Isla mar ahaantaana, waxaan soo dhoofsannaa waxyaabo kiimiko ah iyo walxo cayriin ah oo dibedda ah ayaa daboolaya baahiyaha suuqa gudaha.
Iftiimiyaha ikhtiyaariga ah
Guudmarka Warshadaha Wax Ka Beddelka Caaga
Guudmarka Warshadaha Wax-ka-beddelka Caagga Macnaha iyo astaamaha caagagga injineernimada caagga ah iyo caagagga guud ...
Rajada dalabka o-phenylphenol
Rajada dalabka ee o-phenylphenol O-phenylphenol (OPP) waa nooc cusub oo muhiim ah oo ah alaabooyin kiimiko wanaagsan iyo dhexdhexaadiyeyaal dabiici ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa meelaha lagu nadiifiyo, ka hortagga daxalka, daabacaadda iyo dheehida auxil ...
Ka hortagga sunta iyo fangaska loogu talagalay rinjiga
Antiseptic iyo fungicide for dahaarka Dahaarka waxaa ka mid ah midabka, filler, koollada midabka, emulsion iyo cusbi, qaro weyn, kala firdhiye, defoamer, wakiilka isbarbar dhiga, kaaliyaha sameynta filimka, iwm.